Global Voices teny Malagasy » Kirizy Any Sabah Taorian’ny Olana Saro-bahàna Tany Malezia Niaraka Tamin’ireo Filipiana Mitam-piadiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Marsa 2013 23:32 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Malezia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Ity lahatsoratra ity da ampahany amin'ny tatitra manokana momba ny Fifandraisana Iraisam-pirenena & Fandriampahalemana .
Tamin'ny 9 Febroary 2013, Filipiana 200 mitam-piadiana mpikambana ao amin'ilay antsoina hoe Tafi-panjakàn'i Sulu no nanjanaka ny Lahad Datu any Sabah  (Borneo Avaratra) ary nanambara tamin'ny anaran'ny Soltàna Sulu, Jamalul Kiram III, fa azy ireo tany ireo.
Sabah dia tao anatin'ny  Federasiona Maleziana efa hatramin'ny taona 1963. Fa ny Soltanà Sulu, izay any Filipina Atsimo, dia nanohy ireo fitakiny ara-tantara sy ny fananana ity faritany ity. Ankoatr'izay, Filipina dia mbola tsy nametraka am-pahibemaso ny fitakiany  ny fananany ny faritanin'i Sabah.
Mandritra ny roa tokom-bolana, ny governemanta Maleziana dia nangataka ireo Filipiana mitam-basy tany Lahad Datu mba hilavo lefona. Nefa tamin'ny 5 Martsa, nanafika  ity vondrona ity ireo tafika ary namàrana ilay fanjanahana. Ny fifandonana sy ireo hetsiky ny tafika taorian'izay dia voalaza fa niteraka famoizana ain'olona maherin'ny 60, ka anisan'izany ny mpitandro filaminana 8 Maleziana.
Tsy ela ny Minisitry ny Raharaha Ivelany Maleziana dia nilaza ireo Filipiana nitam-basy ho mpampihorohoro . Nanameloka ny fanjanahana ihany koa ny governemanta Filipiana – izay mamarana fifanaraham-pilaminana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo Silamo mpitaky fizakàn-tena any amin'ny faritra atsimon'ny firenena. Ny filoha Benigno S. Aquino III dia nanameloka ireo “olona liana” miray loha amin'ny fitantanan'ilay nialoha azy tamin'ny “firaisana tsikombakomba”  hitarihana korontana tany Sabah:
Mahagaga fa tsy mbola nolavin'ny Praiminisitra Maleziana Najib Razak ny fanambaràna fa ireo mpanao politika mpanohitra dia niray loha  tamin'ny Soltàna Sulu mba hanakorontanana ny firenena ary handrodànana ny fiaraha-mitantana fitondràna mialohan'ny fifidianana faobe amin'ity taona ity.
Niteraka kirizy teo amin'ny maha-olombelona ihany koa ireo olana saro-bahàna tany Lahad Datu rehefa nisy mponin'i Sabah maromaro manana fiaviana Filipiana nosamborina  ary Filipiana mpifindra monina maherin'ny 1500 nitady fialofana  tany Filipina. Misy koa ny filazàna fa manitsakitsaka zon'olombelona ireo mpitandro filaminana Maleziana, fanambaràna izany nolavin’ ny governemantan'i Kuala Lumpur mafy dia mafy. Niresaka momba ny akon'ny  hetsiky ny tafika tamin'ireo mponin'i Sabah ihany koa ny Fiombonan'ireo Fikambanana Mpiaro Zon'olombelona any Sabah:
Araka izany dia miteraka olana ny resaka Sabah, tsy ho an'ny Malezia ihany fa ho an'ny Filipina koa, ho an'ny hoavy tsy ho ela. Ohatra, Carol Araullo avy ao amin'ny fiaraha-mitantana Bayan miandany havia dia manameloka  an'i Aquino ho tsy niraharaha ireo fitakian'ny Filipina ny faritany:
Maro ireo manomboka milaza fa tsy resy lahatra mihitsy ny fitondràna Aquino fa mitombina  ny fitakian'i Sabah ary tsy hoe teny voatandrina ihany ilay nilazàna izany ho “tsy avotra intsony”, mampiseho ny “tsifahalalàna na tsifahaizana” araka ny ahian'ny Soltàna Jamalul Kiram III, fa fomba fijerin'ny fitondràny ary fitsipika momba ilay raharaha mihitsy aza.
R Kengadharan dia mametraka ireto fanontaniana  ireto ho an'ny fitondràna Maleziana:
Ity lahatsoratra ity sy ireo dikanteniny amin'ny teny Espaniola, Arabo ary Frantsay dia nohafaran'ny Tambajotra Iraisam-pirenena ho an'ny Fandriampahalemana (ISN) ho isan'ny fiaraha-miasa mba hanintonana ny fanehoan-kevitr'ireo olom-pirenena mikasika ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny olan'ny fandriampahalemana maneran-tany. Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany indrindra  tao amin'ny balogin'ny ISN , raha hijery lahatsoratra hafa sahala amin'ity dia jereo ato .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/27/47304/
 Fifandraisana Iraisam-pirenena & Fandriampahalemana: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/international-relations-security/
 “firaisana tsikombakomba”: http://www.gov.ph/2013/03/04/statement-of-president-aquino-on-the-events-in-sabah-march-4-2013-english/
 niray loha: http://www.rappler.com/nation/23032-malaysia-has-own-conspiracy-theory
 nivoaka voalohany indrindra: http://isnblog.ethz.ch/international-relations/crisis-in-sabah-after-malaysias-standoff-with-armed-filipinos